कथाका तीन महारथी
भाद्र २३, २०७५ अभय श्रेष्ठ
काठमाडौँ — कथा लेखेर संसारभरि चिनिएका लेखक अनगिन्ती छन् । तिनका कथा उत्तिकै लोकप्रिय पनि छन् । तर, विश्व कथाका महारथी भने केबल तीन जना छन् । ती हुन्— रुसका आन्तोन चेखब, फ्रान्सका गुई डी मोपासाँ र अमेरिकाका ओ हेनरी । यीभन्दा अगाडिका कथाकारले अधुरो छाडेको फ्रेम यी तीन जनाले पूरा गरे ।
पछाडिका सारा कथा जानी नजानी यिनकै फ्रेमभित्र रहेर लेखिएका छन् । यिनका कथा नपढी संसारमा ज–जसले राम्रा कथा लेखेका छन्, ती पनि तिनका फ्रेमबाट मुक्त छैनन् । संसारका सर्वाधिक लोकप्रिय भएर पनि यीमध्ये चेखब (१८६०–१९०४) र ओ हेनरी (१८६२–१९१०) दुवैले नोबेल पुरस्कार पाएनन् । मोपासाँ (१८५०–१८९३) को त मृत्यु हुँदा नोबेल पुरस्कार नै सुरु भएको थिएन ।
चेखब र जारकालीन रुस
चेखबको मलाई अत्यन्त मन पर्ने र संसारभरि नै रुचाइएको एउटा कथा छ— अ केमेलिन अर्थात् बोली फेर्ने छेपारो । जारकालीन प्रहरी अधिकारीको मानसिकता झल्काउने यस कथामा सुनार रिउकिनको औँला छाडा कुकुरले टोकेपछि बजारमा तमासा हुन्छ । प्रहरी हाकिम अचुमेलोभ रिउकिनको पक्ष लिँदै कुकुर छाड्नेलाई स्वाद चखाउँछु भन्छ । भीडबाट कसैले त्यो कुकुर जर्नेल जिगालोभको हो भन्नासाथ उसको बोली फेरिन्छ । ऊ रिउकिनलाई नै गाली गर्न थाल्छ । सँगै हिँडिरहेको प्रहरी जवान येल्दिरिनले ‘जर्नेलकहाँ यस्तो चुत्थो कुकुर छैन’ भनेपछि ऊ फेरि रिउकिनलाई ढाडस दिन्छ । जर्नेलको भान्छेले कुकुर जर्नेलको भाइको भनेपछि हाकिम त्यही झ्याउरे कुकुरको गुनगान गाउँछ र उल्टै पीडित रिउकिनलाई कारबाही गर्ने धम्की दिन्छ ।
अचुमेलभको नोकरशाही प्रवृत्ति संसारभरिका मानिसभित्र कुनै न कुनै रूपमा जीवित छ । हाम्रा कतिपय ‘चलाख’ युवाकविमा पनि म त्यो चरित्र देख्छु । त्यसैले, यो कथा संसारमा मानव समाज रहुन्जेल जीवित रहन्छ भनिन्छ । ‘क्लर्कको मृत्यु’ शीर्षकको अर्को कथामा अर्कै कार्यालयको सिभिल जर्नेलसामु हाच्छिउँ गर्दा पछुतो मानिरहेको एउटा क्लर्कको कथा छ । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको ‘दोषी चस्मा’ यही कथाबाट प्रभावित मानिन्छ । इभान द्मित्रिच चेभ्र्याकोभ बारम्बार जर्नेलसँग माफी माग्छ । जर्नेल यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैन । क्लर्कको मनले मान्दै मान्दैन । ऊ ठान्छ, जर्नेल रिसाएछ । भोलिपल्ट जर्नेलको घरमै गएर ऊ फेरि माफी माग्छ । आवेगमा आएर जर्नेल उसलाई बेस्सरी झपार्छ । विचरा क्लर्क भित्रभित्रै कुँडिएर घर पुग्छ । कौचमा पल्टिएकै बेला उसको मृत्यु हुन्छ । कति व्यर्थ कुरामा मानिसहरू अमूल्य समय र जीवन नष्ट गरिरहेका हुन्छन् भन्ने कथाले राम्ररी झल्काउँछ ।
चेखबको अर्को विश्वप्रसिद्ध कथा हो— भान्का । नौवर्षे अनाथ सार्की भान्का जुकभलाई हजुरबाले सहरमा काम सिक्न पठाएका हुन्छन् । मालिक, उसको परिवार र सहकर्मीहरू उसलाई दिनुसम्म दु:ख दिन्छन् । अन्तत: कोही नभएको मौका छोपेर ऊ हजुरबालाई आफ्ना सारा दु:ख बयान गरेर चिठी लेख्छ । अत्यन्त निर्दोषितापूर्वक खाममा हजुरबाको ठेगाना लेख्छ— गाउँमा हजुरबा । अनि त्यो चिठी ऊ हुलाक कार्यालयको बाकसमा खसाल्छ ।
चेखब नै संसारका त्यस्ता दुर्लभ कथाकार हुन् जो अत्यन्त तटस्थतापूर्वक मान्छेको इतिवृत्ति केलाउँछन् । मान्छेभित्रको करुणा र क्रूरतालाई उनले जति सायदै अरू कथाकारले नियालेका छन् । ‘ग्रिफ’ शीर्षक कथामा भाडामा बग्गी चलाउने इयानोको असम्भार दु:खको अस्फुट कथा छ । केही दिनअघि मात्र उसको जवान छोराको मृत्यु भएको हुन्छ । त्यो दु:ख ऊ बग्गी चढ्नेहरूलाई सुनाउन चाहन्छ । तर, उनीहरू क्रूरतापूर्वक उसलाई हकार्छन् । उसको व्यथा सुनेर सहानुभूति प्रकट गर्न मान्छे नामका क्रूर प्राणी कोही तयार हुँदैनन् ।
आफ्नो दु:ख अब ऊ कसलाई सुनाओस् ? ऊ घोडीलाई सुनाएर मन हलुका पार्छ । क्रूर मानव समाजप्रति योजति ठूलो व्यंग्य अरू हुनै सक्दैन ।
चेखब १९ औँ शताब्दीको जारकालीन रुसी समाजमा मान्छे नगनिएका, कसैले चासो नदिएका, कसैको नजरमा नपरेका मान्छेहरूको विषाद, खिन्नता, असफलता, आशा र निराशालाई आफ्ना कथामा प्रेमपूर्वक ठाउँ दिन्छन् भने ठूलाहरूको क्रूरता र पाखण्डलाई छताछुल्ल पारिदिन्छन् । ‘शत्रुहरू’ शीर्षक कथामा एक जना डाक्टरकी पत्नीको भर्खरै निधन भएको हुन्छ । पत्नीको सद्गत पनि नगरी ऊ अर्को युवकको आग्रहमा हृदयाघात भएकी उसकी पत्नीको उपचार गर्न पुग्छ । तर, युवककी पत्नीले अर्को पुरुषसँग पोइल जान लोग्नेसँग त्यो नाटक गरेकी हुन्छे । यो थाहा पाएर डाक्टर रिसले चुर हुन्छ । डाक्टरको त्यो असीम उदारता र संवेदनशीलतालाई नबुझी युवक धनको तुजुक देखाउँदै सोध्छ, ‘किन रिसाउँछौ ? मैले तिमीलाई त्यसै बोलाएको छैन । भन, तिम्रो फिस कति भयो ?’ ‘ग्रासहप्पर’ शीर्षक लामो कथामा चाहिँ निर्मोही पत्नीका कारण एक प्रतिभाशाली डाक्टरको जीवन खेर गएको हृदयस्पर्शी कथा छ । ‘वार्ड नं ६’, ‘द ब्राइड’, ‘लेडी विथ द डग’, ‘द बिसप’, ‘द मर्डर’, ‘अ नाइटमेर’, ‘द हाउस विथ द मेजानिन’, ‘द केमिस्ट्स वाइफ’ जस्ता महान् कथामा चेखबले जारकालीन रुसी जीवनको विषादको चित्रण गरे । तर, तिनको सान्दर्भिकता सार्वभौम र संसारव्यापी छ ।
जम्मा ४४ वर्ष बाँचेका चेखबले ६ सय कथा र केही नाटक लेखे । तीमध्ये झन्डै ५० कथा र चार नाटक विश्वप्रसिद्ध छन् । क्रान्तिकारी उपन्यासकार माक्सिम गोर्की र उनी एक अर्कालाई खुबै रुचाउँथे । सन् १९०२ मा गोर्कीलाई रुसको विज्ञान तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्यबाट हटाउन जार निकोलाई द्वितीयले दबाब दिएपछि त्यसअघि नै सदस्य भइसकेका चेखबले चुर भएर राजीनामा गरे । मान्छेको जातै ढोँगी । आफूले नजानेको कुरा, जानेझैँ गर्नुपर्ने, आफ्नो कुरूपता मखुण्डोले छोप्नुपर्ने । तिनैलाई लक्षित गर्दै चेखब गोर्कीसँग भन्ने गर्थे, ‘हरेक मान्छेले आ–आफ्नै भाषा बोल्नुपर्छ ।’ नभन्दै उनले आफ्नै भाषा अर्थात् आफूले राम्ररी चिनेको रुसी जीवनको कथा गहिराइमा पुगेर लेखे ।
मोपासाँ र मखुन्डो
फ्रान्सका मास्टर स्टोरीटेलर मोपासाँका कथाको मुख्य काम हो, मान्छेको मखुन्डो उतार्नु । उनको विचारमा मखुन्डो नभिर्ने वेश्या र किसान मात्र हुन् ।
हामी मान्छेलाई अनेक आवरणमा देख्छौँ । मोपासाँका कथाले चाहिँ मान्छेलाई भित्र र बाहिर सर्वांग नाङ्गो देखाइदिन्छ । एउटी थसुल्ली केटीको अवर्णित दु:ख र समाजका ठालूहरूको ढोँगबारे उनको एउटा उत्कृष्ट कथा छ, ‘बोसोको भकुन्डो’ । थसुल्ली कुनै लामो यात्रामा ठालूहरूसित एउटै बग्गीमा हुन्छे । तिनीहरू उसलाई गर्नुसम्म उपेक्षा गर्छन् । तर, भोकले सताएपछि उनीहरू उही थसुल्लीले दिएको खाजा लाज पचाएर हसुर्छन् । बाटोमा पर्सियन सिपाहीहरूले उनीहरूलाई कब्जामा लिन्छन् । सिपाहीको हाकिम थसुल्लीले ऊसित एक रात बिताउन तयार भए सबैलाई छाड्ने वचन दिन्छ । प्रेमरहित सम्बन्ध राख्न कुनै पनि स्त्री तयार हुँदिन । थसुल्ली कसैगरी मान्दिन । अब सबै ठालूहरू उसलाई हाकिमसँग रात बिताउन खुसामद गर्छन् । धम्की पनि दिन्छन् । अन्तत: दिक्क हुँदै, भुनभुनाउँदै ऊ जान्छे । भोलिपल्ट फेरि यात्रा सुरु हुन्छ । ठालूहरू खानेकुरा बोक्छन् । दिक्क हुँदा बिचरी ऊ खाजा बोक्नै भुल्छे । ठालूहरू जिब्रो पड्काउँदै खाजा खान्छन्, तिनकै मुक्तिका लागि आफ्नो अस्मिता सुम्पेकी उसलाई कसैले वास्ता गर्दैन । उसका आँखाबाट आँसु झर्छ । ठालूहरू खासखुस गर्छन्, ‘राति शत्रुको ओछयान हुन गई, अहिले लाजले रुन थाली ।’
मोपासाँ ११ वर्ष हुँदा उनका बाबुआमाको पारपाचुके भयो । यो उनको जीवनमा ठूलो आघात थियो । आमाप्रति उनको ठूलो आदर थियो । बाबुहरूप्रति घृणा । अत: उनी आजीवन अविवाहित रहे । उनका कथामा यस्ता बालकहरूका प्रतिविम्ब बारम्बार आउँछ । ‘साइमनको पिता’ शीर्षक कथामा उनले आफ्नै दु:खद बाल्यकालको प्रतिकृति उतारेका छन् । ‘द नेकलेस’ उनका सबैभन्दा प्रसिद्ध कथामध्ये एक हो । गरिब क्लर्ककी अतिसुन्दरी पत्नी माथिल्डले एउटा भोजमा साथीसँग सापटी लिएको हिराको हार हराउँछे । ३६ हजार फ्राङ्क पर्ने हार किनेर फर्काउन उनीहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । त्यो ऋण तिरिसक्न उनीहरूले पूरा दस वर्ष हाड घोटेर श्रम गर्नुपर्छ । कडा परिश्रमले यो सुन्दरी अब बूढी देखिन थालिसकेकी थिई । पूरा दस वर्षपछि एक दिन हार सापटी दिने साथीसँग भेट हुन्छ । कुरा खुल्दै जाँदा थाहा हुन्छ, त्यो त नक्कली हार थियो, मुस्किलले पाँच सय फ्राङ्क पर्ने । तुच्छ महत्त्वाकांक्षा र सानो गल्तीले बिचरी उसले जीवनको सौन्दर्य व्यर्थै खेर फाल्नुपर्‍यो । ‘इन द बेडरुम’ मा पत्नीसँग सम्बन्ध तोडेर अर्कै केटीसँग सल्केको लोग्ने पत्नीप्रति अर्को मान्छेले अनुराग देखाएपछि ईष्र्याले जल्न थाल्छ । ऊ फेरि पत्नीसँग सम्बन्ध सुरु गर्न चाहन्छ । तर, पत्नी अब नगरबधूले जस्तै निश्चित रकम लिएर निश्चित समयका लागि मात्र पतिसँग समर्पित हुन तयार हुन्छे । ‘माई अंकल जुल्स’ मा एउटा मध्यमवर्गीय परिवारको दरिद्र मानसिकता र निर्दयताको कथा छ । जोसेफको काका जुल्स अमेरिका गएको हुन्छ । उसले त्यहाँ ठूलो प्रगति गरेको खबरले परिवार आफ्नो दरिद्रता छिट्टै अन्त्य हुने सपना देख्छ । तर, एक दिन बेलायतको सीमामा काका अत्यन्त दीनहीन स्थितिमा बरफ बेचिरहेका भेटिन्छ । त्यस बेला परिवारले ऊप्रति गरेको तिरस्कारले जोसेफको हृदय भित्रैदेखि चिमोटिन्छ । त्यसपछि ऊ काकाको सम्झनामा माग्नेहरू भेट्दा सधैँ पाँच फ्राङ्क दिने गर्छ ।
मोपासाँ अविवाहित रहे तर उनले धेरै नै वेश्यावृत्ति गरे । अन्तत: उनलाई भिरङ्गी भयो । उनको मानसिक सन्तुलन बिग्रियो र एक दिन आमाकै सामु सेरिएर मर्न खोजे । त्यसको एक वर्षपछि ४३ वर्ष नपुग्दै उनको निधन भयो । जीवनमा उनले कुल ३ सय कथा र छ वटा उपन्यास लेखे । तीमध्ये धेरैजसो विश्वप्रसिद्ध भए । उनका कथामा वेश्याहरूका उदात्त जीवन, महिलाका असीम दु:खका अनेक आयाम, मानवीय गरिमा र विडम्बनाका चित्रहरू बारम्बार आउँछन् । ‘आइडिल’ कथामा रेलयात्रामा एउटी मोटी युवती दूध गानिएर मरणान्त हुन्छे । एउटा युवक दूध चुसेर उसको उद्धार गर्छ । ऊ हलुका हुन्छे र युवकप्रति आभार प्रकट गर्छे । युवक भन्छ, ‘मलाई होइन, तिमीलाई धन्यवाद छ । किनभने तीन दिनदेखि मैले केही खान पाएको थिइनँ ।’
ओ हेनरी र विपर्यास
कसैले कथा लेखनको सूत्र सोध्दा ओ हेनरी भन्थे, ‘कथाको अन्त्य सोच्नुस् र लेख्न बस्नुस् ।’ हुन पनि उनका अधिकांश कथामा एउटा चित्रको वर्णन हुन्छ । कथा अन्त्य हुँदा परिस्थिति ठयाक्कै त्यसको उल्टो हुन्छ । मानवीय संवेदना, करुणा, प्रेरणादायी प्रेम अनि विडम्बनाका विविध आयामलाई उनी जसरी प्रस्तुत गर्छन्, त्यो अरूको कथामा दुर्लभ छ । ‘रोमान्स अफ अ बिजी ब्रोकर’ मा एउटा व्यस्त उद्योगी आफ्नै पत्नीसँग बिहेको प्रस्ताव राख्छ । पैसा कमाउने धुनमा ऊ अघिल्लो दिन मात्र आफ्नै बिहे भएको पनि बिर्सन्छ ।
ओ हेनरीको खास नाम थियो— विलियम सिड्नी पोर्टर । उनी एउटा बैंकमा काम गर्थे । पैसा हिनामिना गरेको आरोपमा पाँच वर्ष जेल परे । यही जेल उनलाई वरदान साबित भयो । उनले कथा लेखे र छाप्न पठाए । वास्तविक नाममा पठाएका भए सायदै एउटा कैदीका कथा छापिन्थे । जेलबाट निस्कँदा उनी विख्यात कथाकार भइसकेका थिए । उनले जम्माजम्मी दुई सय कथा लेखे । जति लेखे, मानवीय संवेदनाले भरिपूर्ण, अनुपम र अत्यन्त प्रेरणादायी कथा लेखे । ‘द लास्ट लिफ’ मा एक रोगी युवतीलाई जीवनप्रति आशा जगाइराख्न भूमिका खेल्ने एक कलाकारको बलिदानको महान् कथा छ । ‘द गिफ्ट अफ मेजाई’ मा एक मायालु दम्पतीले एक अर्काप्रति प्रेम दर्शाउन गरेको त्याग त अविस्मरणीय नै छ ।
‘ह्विर्लिगिग अफ लाइफ’ ले दाम्पत्य जीवनको मार्मिक सन्देश दिन्छ । किसान दम्पती रेन्सी बिलब्रो र एरियाला पारपाचुके गर्छन् । वर्षौ सँगै बस्दा उनीहरू एक प्रकारको जीवनमा अभ्यस्त भइसकेका थिए । रजिस्ट्रार अफिसबाट बाहिर निस्केपछि दुवै जना बिलखबन्द पर्छन् ।
‘अब तिमी कहाँ जान्छ्यौ ?’ लोग्ने सोध्छ ।
‘म जहाँ गए पनि तिमीलाई के चासो ? अब म तिम्री को हुँ र ?’ स्वास्नी भन्छे ।
‘तैपनि... कुनै दिन म तिम्रो मायालु श्रीमान् त
थिएँ नि !’
‘अब मामाघर जान्छु । त्यहाँ पुग्न यो पहाड नाघ्नुपर्छ ।’
‘हिँड, म घोडागाडीबाट पुर्‍याइदिन्छु ।’
‘अब तिमीले मेरो चासो गर्नु पर्दैन । हामी एकार्काका लागि बिरानो भइसक्यौँ । अँ बरु, गाईलाई बेलैमा घाँस दिन चाहिँ नबिर्सनू है !’
‘तिमीले अब मेरो गाईको चासो लिनुपर्दैन, बुझ्यौ ?’
‘तिमी खाना पकाउन असाध्यै अल्छी छौ । मैले बिहानको तरकारी र रोटी राखिदिएकी छु । भोकै नबस्नू । बेलुकी त्यही भए पनि खानू ।’
‘ए बाबा, म खाऊँ कि नखाऊ तिमीलाई के चासो हँ ? अब म तिम्रो को हुँ र ?’
‘तिमी आलमारी बन्द गर्न बिर्सन्छौ । मुसा पस्ला, अलि होस गर्नू ।’
उनीहरूबीच यस्ता मार्मिक कुराकानी निकै बेर हुन्छ । अन्तत: एकअर्काबिना बाँच्नै नसक्ने निष्कर्षमा पुगेपछि पुनर्विवाह गर्ने निर्णयमा पुग्छन् । पारपाचुके गर्न लोग्नेले मुस्किलले पाँच डलर बुझाएको थियो । पुनर्विवाह गर्न फेरि पाँच डलर चाहिने भयो जुन उनीहरूसँग छैन । रेन्सी पानी परिरहेको निष्पट अन्धकार रातमा रजिस्ट्रार अफिसको न्यायाधीशको खल्तीबाट पाँच डलर जफत गर्छ । भोलिपल्ट पुनर्विवाहका लागि ऊ त्यही नोट उही न्यायाधीशलाई बुझाउँछ जुन अघिल्लो रातिको पानीले भिज्दा अझै चिसो थियो । चौबीस घन्टामै पारपाचुके र फेरि विवाह । मानवीय सम्बन्धका हिसाबले यो कथा अनुपम छ ।
संसारमा महान् कथाकार अरू पनि छन् । लियो टाल्सटायका गम्भीर चिन्तनसहितका नैतिक कथाको प्रभाव अनुपम छ । माक्सिम गोर्की र लुसुनका निम्न वर्गमा केन्द्रित कथा निश्चय पनि महान् छन् । एडगर एलेन पो, निकोलाई गोगोल, पुस्किन, दस्तोएब्स्की, जोन गल्जवर्दी, समरसेट मम, सात्र्र, कामु, मिखाइल सोलोखोब, भासिली सुक्सिन, रियुनोसुके अकुतागावा, कादरिन म्यान्सफिल्ड कोही पनि कमजोर कथाकार होइनन् । तर चेखब, मोपासाँ र ओ हेनरी अतुलनीय लाग्छन् । हेनरीलाई अमेरिकी मोपासाँ अनि कथा लेखेरै सन् २०१३ को नोबेल पुरस्कार जितेकी एलिस मुनरोलाई ‘आधुनिक चेखब’ त्यसै भनिएको होइन ।